G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင်
1 G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 30th August 2009, 5:16 am
တခြားလူတွေနဲ့လည်း စာက မရိုက်ချင်ဘူး ..အဲဒီ့ အချိန် ကျမှ ကိုယ် နဲ့ စကားပြောမယ့် လူကလည်း online မှာ အလိုက်ကမသိဘူး .. လူရှုပ်နေတဲ့ အချိန်ကလာသေး ပေါ့ .. အဲဒီ့လူနဲ့ကလည်း စကားပြောရမှ ကျေနပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးက တော်တော့် ကို အသုံးဝင်ပါတယ် .. ဟီး ဟီး ... g talk မှာ ကိုယ်က offline ပြပြီးတော့ online က လူ ကို စကားပြောတာလေးပါ ... mail ထဲကနေပေါ့ ..အဲဒါကလေးကို လုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး gmail ကနေပြီးတော့ ပြထားတဲ့ video and voice setup ဆိုတာကို အရင် ဆုံး down ရပါ့မယ် .. ပြီးရင်တော့ run လိုက်ပေါ့ .... မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက် မှာ ရှိတယ်နော် .. ယူလိုက်ပါ ..တစ်နေရာရာကနေ Down လိုက်ပါ ..
run ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်တာပေါ့ .. gmail ကို ၀င်လိုက်ပါ .. ၀င်ပြီးသွားရင် ကိုယ့် နစ်ထဲမှာရှိတဲ့ online က လူတစ်ယောက် ကို chat ဖို့ လုပ်လိုက်ပါ ..အဲဒါဆိုရင် ညာဘက် အောက် ထောင့်လေးမှာ သူနဲ့ chat ဖို့အတွက် box ကလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...ပေါ်လာတာကလေးကိုမှ အောက် က ပုံကလေးထဲ ကလို start voice chat ဆိုတာကလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ပထမ တစ်ခေါက် ကတော့ နဲနဲ ကြာတယ်ဗျ .. မရလောက်သေးဘူး .. မရသေးရင် နောက်ထပ် ထပ်ခေါ်လိုက်ပါ .. ဒုတိယ တစ်ခေါက် လောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေ ပါတယ် .. သူ့ဘက်က ကိုင်ရင်ပေါ့ .. စပြီးတော့ စကားပြောလို့ရပါပြီ . အဲဒါဆိုရင် .. ကဲ ပုန်းရင်းကွယ် ရင်း ရှောင်ရင်း ရှားရင်း စကားပြော နိုင်ပါစေဗျာ.. အဆင်ပြေပါစေဗျာ ..အဆင်မပြေခဲ့တာလေးတွေရှိရင်လည်း ပြောခဲ့ပါဦးနော် .. အဲ ပြောဖို့မေ့သွားလို့ .. ကိုယ်က offline က နေပြီးတော့ ပြောမှာဆိုတော့ invisible ကလေးတော့ လုပ်ထားဖို့လိုမယ်နော် ...ဟီး ...
ပုန်းရင် ကွယ် ရင်းချက် နိုင် ကြပါစေဗျာ ....
2 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 30th August 2009, 8:59 am
3 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 30th August 2009, 5:15 pm
တစ်ခုလောက်တော. မေးကြည်.ချင်တယ်ဗျာ...vzo နဂိုတင်ပြီးသားဆိုရင် ထပ်တင်လို. အဆင်ပြေပါ.မလား စမ်းတော. မစမ်းကြည်.ဘူးသေးပါဘူး
4 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 30th August 2009, 11:03 pm
ရပါတယ် VZO နဲ့ က ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ... သုံးလို့ ရပါတယ်
5 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 31st August 2009, 9:48 am
[ ပထမ တစ်ခေါက် ကတော့ နဲနဲ ကြာတယ်ဗျ ..
မရလောက်သေးဘူး .. မရသေးရင် နောက်ထပ် ထပ်ခေါ်လိုက်ပါ .. ဒုတိယ တစ်ခေါက်
လောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေ ပါတယ် .. သူ့ဘက်က ကိုင်ရင်ပေါ့ .. စပြီးတော့
online ဆိုပဲ့ သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တာ
6 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 1st September 2009, 4:53 pm
အော် အဲဒါက မဟုတ်ပါဘူး .. ပထမ ကိုယ်က စခေါ်တယ်ဆိုရင် ဖုန်း ၀င်တဲ့ အသံက နဲနဲ ကြာတယ် .. စောင့်ရတာကို ပြောတာပါ .. အဲဒါကြောင့် နောက် တစ်ခေါက်ကို ထပ် ခေါ် ခိုင်းတာပါ .. online ဆိုတာက ကိုမင်းကို က invisible ပေး ထားရမယ် လေ အဲဒါဆိုရင် တော့ online မှာမရှိဘူးထင်တယ်ဗျ .. ကျွန်တော် စမ်းကြည့် ပီးပါပြီ
7 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 1st September 2009, 6:32 pm
online ဆိုတာက ကိုမင်းကို က invisible ပေး ထားရမယ် လေ အဲဒါဆိုရင် တော့ online မှာမရှိဘူးထင်တယ်ဗျ .. ကျွန်တော် စမ်းကြည့် ပီးပါပြီ
8 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 1st September 2009, 7:38 pm
G Mail က chat ထဲမှာ Available မြှားအောက်မှာ ရှိပါတယ် .. invisible ဆိုတာ .. နှိပ်လိုက်ရင် မမြင်ရတော့ပါဘူး ..
9 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 3rd September 2009, 10:00 pm
ကိုမင်းကို ရေ .. ဒီအောက်က ပုံကလေးမှာ ကျွန်တော် invisible လုပ်တဲ့ ပုံကလေးကို ပြထားလိုက်တယ်နော် ..အဲဒီ့ မြှားကလေးကို အောက်ကို ဆွဲချလိုက်ပါ .. ပြီးရင် အဲဒီ့အောက်မှာ invisible ဆိုတာကလေးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ..
10 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင် on 4th September 2009, 6:45 pm
11 Re: G talk မှာ offline ကနေပြီးတော စကား ပြောကြည့်ရအောင်